Isu takaedza Aukey's USB-C Hub, iyo 8-chiteshi zvese-mu-imwe yakakwana yeMacBook M1 nyowani [KUDZIDZA] | Gadget nhau
Isu takaedza Aukey's USB-C Hub, iyo 8-chiteshi zvese-mu-imwe yakakwana yeMacBook M1 nyowani [REVIEW]
Imwe yematambudziko makuru andakasangana nawo pakuwana nyowani MacBook Pro ine M1 processor yaive kushomeka kwezviteshi, dambudziko rinowedzera kazhinji kubva mufashoni, kunyanya muApple, ndeyekuvhura zvishandiso zvine mashoma uye mashoma madoko Vakomana ve Aukey anofanira kunge akaverenga pfungwa dzangu uye akatipa yavo nyowani 8-chiteshi USB-C Hub.
Inonakidza Hub 8 mu1 iyo yauchamira nayo kuve nedambudziko rekushaikwa kwezviteshi pamakomputa ako. Zvakareruka ruoko rwakabatana pamwe nekushanduka-shanduka mune chigadzirwa kubva kune imwe yemhando dzinokurumidza kukura mune tekinoroji ecosystem. Ramba uchiverenga kuti isu tinokuudza iwe zvese zvakadzama zveiyi Aukey USB-C Hub.
Zvese zvinhu zvinofanirwa kutaurwa, iri Hub, usatarisira chimwe chinhu kubva pane zvakajairwa, a Hub ine 8 zviteshi izvo zvichanyatso kugadzirisa matambudziko ese echiteshi yatinogona kuva nayo pane chero chinhu. Iyo Plug uye Play saka isu tinongofanirwa kuibatanidza kune USB-C chiteshi cheAukey kuti tiite ese mashiripiti anodikanwa kune edu ekunze mashandiro.
Sezvauri kuona mumifananidzo, iyo mudziyo wakanaka kwazvo, mune «nzvimbo nhema» yakafanana chaizvo neruvara iyo Apple inogadzira maMac ayo. Pamusoro tichaona chinzvimbo chimwe chakatungamirwa chisingakanganise zvachose, y pamativi isu tine madoko ese kuti vakomana veAukey vatipe.
Sezvauri kuona mune yapfuura gallery, isu tine anotevera madoko:
USB-C ine Kuendesa Simba izvo zvakare zvinokutendera iwe kubhadharisa Mac yako kana iwe uri kushandisa imwe yasara USB-C chiteshi cheimwe kifaa.
Puerto HDMI inoenderana ne4K resolution.
3 USB-A zviteshi (Maviri acho 2 akaratidzirwa nebhuruu).
Imwe kadhi re SD, inobatsira zvakanyanya kufunga kuti mashoma uye mashoma malaptop anoisanganisira
MicroSD kadhi slot.
Ethernet port, ine maLED maviri anozoratidza chinzvimbo chekubatana (hatigone kuvaremadza asi havanetseke zvakanyanya).
Sezvauri kuona, hatigone kupotsa chero chiteshiNekudaro, isu tinofanirwa kungwarira kana tikashandisa ese panguva imwe chete, kunyanya kuitira kuti Hub ipise uye isashande nemazvo. Sechikamu chakashata ini ndichataurawo kuti iri USB-C Hub, haisi Thunderbolt 3, asi zviri pachena pamutengo unotengeswa ndiyo sarudzo huru. Kutinhira 3 kunobvumira kumhanya kwakakwira uye kazhinji kunowaniswa simba kunze.
Chimwe chezvakanaka zveiyi 8-in-1 USB-C Hub ndeyayo saizi, inotakurika zvikuru, uye zvakare vakomana vanobva kuAukey vanotipa iyo yakanakisa kutakura kesi uye neayo yekuchengetedzawo USB-C tambo yeHub. Pasina kupokana, ruzivo rwunokosheswa.
Tevedza iyi link kuti utenge Aukey's 8-in-1 USB-C HUB, sekukutaurira kwauri i yakanaka kwazvo sarudzo kune chero munhu atenga nyowani MacBook Pro kana Mhepo ine M1 processorMukupedzisira iwo madoko ane mashoma uye iine Hub yeaya maitiro isu tangopfuura kugadzirisa dambudziko nezviteshi. Iyo Mutengo unowanzo kuve uri pakati pe € 35 kunyangwe iwe uchigona kuuwana pane imwe nhambo padyo ne20 Euro. Ndinozvikurudzira, ini ndato kukuudza kuti haisi dutu remubvumo asi pazviitiko zvakawanda iwe zvaunoda imwe chiteshi unopa zvakanyanya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » Gadgets » Accessories » Isu takaedza Aukey's USB-C Hub, iyo 8-chiteshi zvese-mu-imwe yakakwana yeMacBook M1 nyowani [REVIEW]
Maitiro ekugadzira yako wega WiFi Mesh network kumba